Caqli-gal: WordPress Plugins - Imisa ayaad u isticmaali kartaa?
WordPress wuxuu u adeegaa dad weyn oo adduunka ah oo ku saabsan codsigiisa. Waa mid ka mid ah CMS-ka ugu wanaagsan. Dad badan oo bloggers ah iyo shirkadaha eCommerce ayaa tixgelinaya WordPress sababtoo ah waxay ku kalsoon tahay waxa ay bixiso. Intaas waxaa sii dheer, bogagyada WordPress waxay la imanayaan mawduucyo kala duwan iyo u-habeyn si ay ugu habboonaadaan baahidaada boggaaga - 2gb ram windows vps hosting. Mid ka mid ah khiyaamaynta khafiifinta fudfudud ah waa iyada oo loo marayo isticmaalka plugins. Plugins waa xubno ka mid ah mawduuca WordPress oo ku dari kara qiimaha habka aad websiteka uga jawaabto.
Ku caawi siyaabo badan si gaar ah markaad u baahato hawl qabad. Waa inaad ogaatid in plugins WordPress intoodi ay qayb ka yihiin mawduucyada. Isbedelada ayaa laga yaabaa inay lumaan markaad bedesho ama bedesho mawduucaaga. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah pluginnada WordPress-ku gaar ah ayaa haysan kara qaar ka mid ah jilayaasha koodhka xaaladahaas. Alexander Peresunko, oo ah khibrad hormuud u ah Semmat , wuxuu tilmaamayaa in isticmaalka khidadaha ay saameyn karaan waxqabadka mawduucaaga
Meelo badan oo Plugins ah oo WordPress ah 'aad u badan'?
Sida kor ku xusan, plugins ayaa ah qashinqubka PHP code kaas oo ku daraya waxqabadkaaga boggaaga cusub ee WordPress. Si kastaba ha noqotee, marka aad sii wado in aad baddesho website-kaaga, waqtiga jawaab-celinta ee nidaamku wuxuu bilaabi karaa inuu hoos u dhaco. Website-yada aadka loo qaabeeyay ayaa aad u gaabis ah, oo saameyn xun ku yeeshay mootada raadinta . Sida korka loo arko, qaylo-dhaaneedku waxay u shaqeeyaan sida xarfaha isku-dhafan ee bogga guud. Marka tan la eego, sida goobtu ay korodho koodhka, waxay u egtahay inay noqoto mid gaabis ah..Google wuxuu u adeegsanayaa jawaab-celin shabakadeed oo ah isir-qiimeyn ay ku jiraan SERPs
Tusaale ahaan, haddii aad isticmaasho in ka badan 30 waxyaalood oo sahlan, ma badali karto jawaabta boggaaga. Xaaladaha kale, dejinta code aad u badan boggaaga waa waxa ku qeexaya waqtiga jawaabahaaga. Faa'iido leh qashin badan oo badan ayaa yeelan kara saameyn isku mid ah websiteka iyadoo la adeegsanayo plugins badan. Sida codeeynta bogga, waxaad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso xeerka goobta uu socdo.
Waa kuwee khadka ugu wanaagsan ee loo isticmaalo?
Go'aanka ah isticmaalka plugin WordPress wuxuu kuxiran yahay adiga. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad gaarto saameyn gaar ah. Xaaladdan, waxay noqon kartaa lagama maarmaan in la sameeyo plugin PHP kuu gaar ah. Qoraalada hore, waxaa jira siyaabo badan oo loo kobcin karo khadadaha fudud. Waxaad u baahan tahay kaliya farsamo-yaqaan sida qaabka faylka WordPress. Sidoo kale, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad awood u yeelato inaad sameysid faylka PHP iyadoo la adeegsanayo qoraallada fudud
Plugins ma aha mid ikhtiyaari ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waxyaabo muhiim ah oo muhiim ah oo ka dhigaya website-kaaga si ka fiican. Qaar ka mid ah waa in ay leeyihiin WordPress ku darsaday waxaa ka mid ah:
Dadka doonaya in ay ka faaiidaystaan ​​boggooda sawirka raadinta, qodobkan waxaa ku jira dhammaan dhinacyada lagama maarmaanka ah ee SEO. Laga soo bilaabo raadinta muhiimka ah si loo helo qaab-dhiska metada, waxaa jira xaalado badan oo ay dadku sameeyaan waxtaro waxtar leh
Tani waa dhammaanteed hal plugin kaas oo ka caawiya qofku inuu maamulo dhinacyada muhiimka ah ee xogtaada. Tusaale ahaan, waxaad awoodi kartaa inaad ku darto ama dayac tirto databasekaaga. Waxa kale oo aad kari kartaa boggaaga internetka si aad dib ugu soo celiso isbeddelada haddii ay dhacdo wax qaldan.
W3 Wadarta Cache:
Kaalintani waxay ka caawin kartaa shabakadaada inay horumariyaan taraafikada. Waxay ka caawisaa in la sii wado qofkii soo booqday adoo siinaya xayeysiisyo dheeraad ah boggaaga.